မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း (၄) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း (၄)
ကျ မ အ သက် ဆယ့် ရှစ် နှစ် စွန်း ခါ စ တွင် ၊ ရန် ကုန် သို့ ပြောင်း ရွေ့ နေ ထိုင် ခဲ့ ပါ သည် ။ ရန် ကုန် တွင် နေ ထိုင် စဉ် ၊ အ ယင် က ဦး နှင့်အ တူ သွား ခဲ့ သည့် နေ ရာ များ ကို စိတ် ထဲ မှ လွမ်း ဆွတ် ခါ ၊ ရင် ထဲ မှ နာ ကျင် နေ သည့် ဝေ ဒ နာ များ တ ရိပ် ရိပ် ခံ စား နေ ခဲ့ ရ ပါ သည် ။
ကျ မ နေ ထိုင် သော နေ ရာ က ၊ ဗ န္ဓု လ ပန်း ခြံ လမ်း ၊ အောက် ဘ လောက် အ ဆုံး ၌ ဖြစ် ၍ ပင် လယ် ကူး သင်္ဘော ကြီး တွေ ဆိုက် ကပ် သော နေ ရာ နှင့် အ လှမ်း နီး လှ ပါ သည် ။
ထို စဉ် က မေ ဆွိ သီ ဆို ပြီး အောင် မြင် ကျော် ကြား လူ ကြိုက် များ သည့် သီ ချင်း တ ပုဒ် ဖြစ် သည့်
“သ မီး နဲ့ ဦး” က နေ ရာ တိုင်း မှာ လွင့် ပြန့်နေ လျှက် ရှိ ပါ သည် ။ ထို သီ ချင်း အား ကြိုက် နှစ် သက် မိ နေ သ လို ဖြစ် ပြီး ၊ ကျ မ မှ မ ကြာ ခ ဏ ဆို သလို ပင် ဆို ငြီး နေ မိ တတ် ပါ သေး သည် ။
ဒီ ကြား ထဲ ပင် လယ် ကူး သင်္ဘော တွေ ဆိုက် ကပ် ခါ ၊ ကျောက် ချ ရပ် နား ပြီး သင်္ဘော အ ချက် ပေး သံ များ ကြား ရ သည့် အ ချိန် တိုင်း…….
အ မြဲ တမ်း လို လို ……
ဦး ကို တမ်း တ လွမ်း ဆွတ် နေ မိ တတ် ပါ သည်။
တစ် ခါ , တစ် ခါ …..
ရင် ထဲ မှာ အ မျိုး အ မည် မ သိ ဝေ ဒ နာ များ က ၀င် ရောက် ခါ ၊ နာ နာ ကျင် ကျင် ဆွတ် ပြန့်ကာ ၊ ခံ စား နေ ရ သ ဖြင့် လည်း ၊ ရံ ဖန် ရံ ခါ ဆို သ လို ပင် ဆိပ် ကမ်း ဖက် သို့ မ ကြာ ခ ဏ လှမ်း မျှော် ကြည့် နေ မိ တတ် ခဲ့ ပါ သည်။ စိတ် ထဲ တွင် လည်း
ဦး ကို “မုံး စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး” ဟု တွေး တော ဖြစ် ပေါ် နေ မိ တတ် ပါ သည်။
အစ် မ ဖြစ် သူ မ ကြီး ကျယ် အ ကြောင်း စဉ်း စား မိ ပါ က ၊ စိတ် နာ နေ မိ ခဲ့ ပါ သည်။
ရန် ကုန် မှာ နေ နေ ရ သော် လည်း …..
ဦး နှင့် ပတ် သက် သည့် ပါတ် ၀န်း ကျင် က …..
ကျ မ အ တွက် တ စိမ်း တ ရံ ဆန် လွန်း နေ လှ ပါ သည်….
အစ် မ ကြီး ကျယ် လုပ် ရပ် က ၊ အ ရှက် ဂုဏ် သိ က္ခာ နှင့် ပတ် သက် နေ သ ဖြင့် လည်း…..
ဦး ပြော သ လို ပင် ….
အိုး ချမ်း ကွဲ အား ပြန် ဆက် ဖို့က မ ဖြစ် နိုင် ပါ ပေ။
တ ရက် တွင် …..
အစ် မ ကြီး ကျယ် တို့ လင် မ ယား ၊ ကျ မ ဆီ ရောက် လာ ကြ ပါ သည် ။
ဦး အ ကြောင်း အား ဟ ပင် မ ဟ ၊ မေး ဖို့မ ဆို ထား နှင့် အ ရိပ် ရောင် မျှ ပင် မ သန်း ပါ ။ ကျ မ က လွန် စွာ သိ ချင် နေ မိ ပါ သည် ။ မေး ဘို့ က လည်း မ ဖြစ် နိုင် ပါ ၊ ခဲ အို က ပါ နေ ပါ သည်။ ဦး နှင့် ပတ် သက် သည့် သ တင်း အ စ အ န အား ဘာ မျှ မ သိ ရ သ ဖြင့် လည်း ….
နေ နိုင် လွန်း သည့် ဦး ……
မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး……ဟု သာ ထင် နေ မိ ပါ သည်။
လွမ်း ရ လွန်း ၍ လည်း ထို သို့ခံ စား နေ ရ တာ ဖြစ် မည် ထင် ပါ သည် ။
အစ် မ ကြီး ကျယ် က မ မျှော် လင့် သော ရက် များ တွင် ၊ ကျ မ ထံ ပေါက် ချ လာ ခဲ့ ပြီး ၊ ၀မ်း သာ စ ရာ သ တင်း ပါ လာ သည် ဟု ပြော ကာ….
ဦး ထံ က အ ဖေ့ ဆီ သို့ဆက် သွယ် သော စာ တ စောင် ရ ရှိ သည်။ စာ ပါ အ ကြောင်း အ ရာ များ က နင့် အား ပြော ပြ ၍ မ ဖြစ် ဟု ဆို ပါ သည်။ ကျ မ မှာ အစ် မ ကြီး ကျယ် စ ကား အား အီ လည် လည် ကြီး ဖြစ် ခါ ပို ၍ သိ ချင် နေ မိ ပါ သည်။ အစ် မ ကြီး ကျယ် က နောက် မှ ပြော ပြ မည် ဟု ဆို ကာ ပြော ပါ သည်။
ထို စ ကား က ကျ မ အ တွက် ….
အ ရေး ကြီး လှ သည့် အ ကြောင်း အ ရာ ဖြစ် နေ ပါ လျှင်….
ကြို တင် သိ ထား သင့် သည့် စ ကား ဖြစ် နေ ပါ က…..
ကျ မ ဘ ၀ အ တွက် အ ဖိုး ဖြတ် နိုင် မည် မ ဟု တ် ပါ ……။
န မိတ် စ ကား အ ရ ကောက် လျှင် တော့ ၊ နောက် ကျ မှ သိ ရ လျှင် ၊ နောက် ကျ သွား ပြီ ဟု အ ဓိ ပ္ပါယ် ရောက် သွား နိုင် ပါ သည် ။
ကျ မ အ တွက် ရည် ရွယ် နေ သည့် စ ကား မျိုး ဖြစ် ၍ ကျ မ ဘ ၀ အ တွက် အ ဓိ ပ္ပါယ် များ စွာ မဲ့ သွား နိုင် သည် ဟု ကျ မ မှ ထင် မြင် မိ ပါ သည်။
အစ် မ ကြီး ကျယ် ကို လည်း ၊ ကျ မ ၏ စိတ် ထဲ မှ များ စွာ စိတ် မ ကောင်း ဖြစ် မိ ရ ပြီး ၊ စိတ် ထိ ခိုက် ခံ စား ရ ကာ ၊ စ ကား ပင် ဆက် မ ပြော ချင် လောက် အောင် ဖြစ် သွား ခဲ့ ရ ပါ တော့ သည်။
အ ရေး ကြီး သည့် စ ကား အား ၊ မ ပြော ပဲ နှင့် နေ နိုင် လွန်း ပေ စွ ဟု ထင် ခဲ့ မိ ပါ သည်။
ဦး က ပြန် မည် ဟု ဆို ခါ နှုတ် ဆက် ပြီး မှ ၊ အ ဖေ့ အား အ ရေး ကြီး သည့် စ ကား ထပ် မံ ပြော ဆို သွား သည့် ကိ စ္စ အား ၊ မည် သည့် ကိ စ္စ ဖြစ် မည် ကို သိ နား လည် နိုင် ခြင်း မ ရှိ ခဲ့ ပါ။
အစ် မ ကြီး ကျယ် ကိ စ္စ အ တွက် ထပ် မှာ သွား သည့် အ ကြောင်း အ ရာ များ ပင် ဖြစ် နေ လား…
လား ပေါင်း များ စွာ ဖြင့် စဉ်း စား ၍ ကား မ ရ နိုင် ခဲ့ ပါ။
အစ် မ ကြီး ကျယ် က အိမ် ထောင် ပြု သွား ပြီ ….
ဦး က ကျ မ ကို ပြော သည် မှာ ၊ အစ် မ ကြီး ကျယ် က သူ့ဆီ ဘယ် တော့ မှ ပြန် လာ မည် မ ဟုတ် ဟု သာ ပြော ပြ ဘူး ပါ သည် ။ မည် သည့် ကိ စ္စ ဖြင့်ပြော စ ရာ စ ကား တို့ကြံ နေ ပြန် သ နည်း ။
နှစ် ဖက် ဆက် ဆံ မှု များ က ၊ အိုး ချမ်း ကွဲ လို ပြန် ဆက် နိုင် မှာ တော့ မ ဟုတ် ကြောင်း……
ထို စ ကား များ က …..
ကျ မ နား ထဲ တွင် အ ထပ် ထပ် ကြား ယောင် နေ မိ သော စ ကား များ ပင် ဖြစ် ပါ သည်။
ဦး က တော့…..
ဆို ခဲ စေ ၊ မြဲ စေ…….
ဆို သည့် လူ မျိုး ဖြစ် သည် ကို ကျ မ က အ တတ် သိ နေ ပါ သည်။ ကျ မ အစ် မ ကြီး ကျယ် က စောင့် ပါ ဆို လျှင် ၊ က မ္ဘာ လ ဆန်း (၁) ရက် နေ့အ ထိ စောင့် နေ မည့် လူ စား မျိုး သာ တည်း။
အစ် မ ကြီး ကျယ် ၏ ပွင့် ပွင့် လင်း လင်း မ ရှိ သော ၊ စကား များ က ကျ မ ၏ စိတ် ကို အ နှောက် အ ယှက် ပေး ရုံ မျှ သာ မ က ၊ ဝေ ခွဲ မ ရ ဖြစ် သည့် အ ပြင် စိတ် ကို ဒွိ ဟ ဖြစ် စေ ခဲ့ ပါ သည်။
ဘာ မျှ မ သိ ရ သ ဖြင့် နောက် ပိုင်း တွင် ၊ ကျ မ ၏ စိတ် ကို ကျ မ ဆုံး မ ခါ ၊ စိတ် က ဦး ကို မေ့ ပျောက် ထား နိုင် သ မျှ မေ့ မေ့ ပျောက် ပျောက် နေ ခဲ့ မိ ပါ သည် ။
မ မျှော် လင့် ထား သော တ နေ့တွင် ၊ ရုတ် ချည်း ဘွား က နဲ ပေါ် လာ သူ ကား ဦး ပင် ဖြစ် တော့ သည် ။
ဆုံ သည့် နေ ရာ က ဗိုလ် ချုပ် လမ်း နှင့် ဆူး လေ ဘု ရား လမ်း ဆုံ ၊ မီး ပွိုင့် ပြည် သူ့မုန့်တိုက် အ နီး တွင် တွေ့ဆုံ ရ ခြင်း ပင် ။ ကျ မ က အ ဖော် သူ ငယ် ချင်း များ အား မီး ပွိုင့် အ နား ၊ အ ကြာ ကြီး ရပ် စောင့် နေ သည့် အ ချိန် ၊ ဦး က လည်း သ င်္ဘော သား အ ရာ ရှိ ၀တ် စုံ အ ပြည့် ဖြင့် ၊ ကျ မ နှင့် တူ သည် ဟု စိတ် က ထင် လျှက် ၊ ဟုတ် မ ဟုတ် အား အ နောက် မှ နေ ၍ ၊ မ မှိတ် မ သုံ ရပ် ကြည့် နေ မိ သည် ဟု ဆို ပါ သည်။
မြင် တွေ့လိုက် သည့် မိန်း ခ လေး အား….
တူ လွန်း သည် ၊ ဒီ အ ရွယ် လောက် ရှိ နေ မည် မှာ အ မှန်..
ဒီ ထက် လည်း မ က ၊ ဒီ ထက် လည်း မ လျှော့ အောင် လှ နေ မည့် သူ ဟု ဆို ခါ ၊ ဦး က ထင် နေ မိ သည့် အ ပြင် ၊ စိတ် ထဲ တွင် လည်း တ ရင်း တ နှီး ကြီး ခံ စား ဖြစ် ပေါ် နေ သည် ဟု ဦး မှ ပြော ပြ ခဲ့ ပါ သည် ။ မေး မိ ပြန် က လည်း ၊ မ ဟုတ် ခဲ့ ပါ က မြို့လယ် ခေါင် ကြီး အ ကြောင် ရိုက် တာ လား ဟု အ ပြော ခံ ရ ပါ လျှင် ၊ သင်္ဘော သား ၀တ် စုံ ကြီး နှင့် ဖြစ် နေ ၍ ဣနြေ္ဒ သိက္ခာ ဆည် ကာ မ မေး ရဲ ၊ ရှေ့ တည့် တည့် မှ လည်း မ ကြည့် ရဲ ၊ အ နောက် က နေ သာ ရပ် ကြည့် နေ မိ သည် ဟု ပြော ပြ ပါ သည်။
သူ ငယ် ချင်း အား ထို နေ ရာ တွင် ၊ တွေ့ဆုံ ရန် ချိန်း ထား သည် ဟု ထင် ရ ပြီး စိတ် ထဲ မှ လည်း မ နှစ် သက် နေ သ လို ဖြစ် နေ မိ ခါ ၊ စိတ် မ ကောင်း လည်း တ ပြိုင် တည်း ဖြစ် ပေါ် ခံ စား နေ ကြောင်း ၊ အ လွန် ဆန်း ကျယ် လှ ကြောင်း ၊ ဘာ ကြောင့် မှန်း မ သိ ၊ ဘာ ဖြစ် မှန်း မ သိ ဖြစ် နေ ကြောင်း ၊ ရင် ထဲ တွင် လည်း ဟာ တာ တာ ကြီး လို ဖြစ် ပေါ် ခံ စား နေ ရ ကြောင်း ၊ အ ဖော် များ ရောက် လာ ခါ မှ ပင် ၊ ဇတ် ဇတ် ကြဲ ကြဲ မိန်း က လေး များ ဖြစ် နေ ကြ သည် ကို သိ ခဲ့ ရ ကြောင်း ၊ အ ကြီး ကျယ် စိတ် တို ပြီး တ ယောက် ကို တ ယောက် အ ပြစ် တင် လျှက် ဆူ ညံ သွား ကြ သည် ကို ၊ အ စ အ ဆုံး မြင် တွေ့ နေ ရ သည် ဟု ပြော ပါ သည်။
လူ စု ကွဲ ပြီး ၊ ပြည် သူ့မုန့်တိုက် အ နီး တွေ့မြင် နိုင် သည့် နေ ရာ မျိုး ၌ သ္မီး က စောင့် နေ ခြင်း ဖြစ် သည် ကို သိ ရ ၍ ရင် အေး သွား ရ ကြောင်း ….၊ အ သံ ကြား လိုက် ရ သည့် အ ချိန် ၊သ္မီး အ သံ ဖြစ် နေ မှန်း ကို တတ် အပ် သိ လိုက် ကြောင်း ပြော ပြ ပါ တော့ သည် ။
ဦး က လည်း ခေါင်း မှာ ဆောင်း ထား သည့် ၊ နေ ဗီ ပိ ကက် ဥူး ထုတ် အား သ္မီး မြင် အောင် ဟု ဆို ခါ ၊ လှမ်း အ ချွတ် သ္မီး အား လှမ်း ခေါ် မည် အ ပြု ၊ သ မီး က လည်း သူ ငယ် ချင်း များ ၏ လက် ကို ဆွဲ လျှက် က ဦး ကို တွေ့ပြီး အံ့ သြ လွန်း သည့် ဟန် အ မူ အ ယာ က ၊ သ္မီး မျက် နှာ မှာ အ ထင်း သား အ တိုင်း သား ပေါ် လွင် နေ သည် ကို လှမ်း မြင် လိုက် ရ ကြောင်း ဦး က ပြော ပြ ပါ သည် ။
ခ ဏ အ တွင်း ဦး နှင့် အ ကြ ည့် ခြင်း ဆုံ မိ အ ခိုက် တွင်
ကျ မ ၏ ခြေ လှမ်း များ က ၊ ရုတ် တ ရက် ရှေ့ ဆက် မ လှမ်း နိုင် တော့ ပဲ ဖြစ် မိ သွား ပါသည် ။
ကျ မ မှ လည်း ရုတ် တ ရက် ၊ ၀မ်း သာ အယ် လည်း ဖြစ် မိ သွား ရ ခါ
အာ မေ ဋိက် အ သံ ဖြင့် အား ပါး တ ရ ၊ ၀မ်း သာ အား ရ စွာ နှင့် လှမ်း အော် ခေါ် မိ လိုက် ပါ သည်။
သူ ငယ် ချင်း များ က လည်း ၊ အံ့ အား သင့် ကုန် ကြ ခါ
ကျ မ အား ၊ အား လုံး က ၀ိုင်း ၀န်း မေး မြန်း စပ် စု ခြင်း ခံ ရ ပါ တော့ သည် ။
မိတ် ဆွေ လား….
ဘ င်္ဂ လား မောင် နှ မ လား…
ငါ တို့ ကို လည်း မိတ် ဆက် ပေး ဦး လေ , ……
ဟု ဆို သည့် အ သံ များ ဖြင့် ဆူ ညံ သွား ပါ သည် ။
ဦး က လည်း …..
ကျ မ အား ၊ သူ ငယ် ချင်း များ က လက် ပံ ပင် ၌ ဇ ရက် တ အုပ် ကျ နေ သည့် အ တိုင်း ပဲ ဟု ၊ ပြော ဆို ပြီး
ထို စ ကား သံ များ ကြား ကြား ခြင်း ၊ ဘာ ပြော ရ မှန်း ပင် မ သိ အောင် ပင် ဖြစ် ရ သည် ဟု ဦး က ဆို ပါ သည် ။
ဦး က များ စွာ ရှက် စိတ် ဖြစ် သွား ရ ပြီး ၊ သ္မီး ၏ သူ ငယ် ချင်း များ အား ၊ ခု ချက် ခြင်း သ င်္ဘော ပေါ် ပြန် တက် ရ မည် ။ သ မီး အ ဖေ အား အ လွန် အ ရေး ကြီး သည့် မှာ စ ရာ စ ကား ရှိ သည် ။
အ ရေး ကြီး ကိစ္စ အ သဲ အ သန် ပြော စ ရာ ရှိ သည် ဟု ၊ ဆို ပြီး နား လည် သ ဘော ပေါက် အောင် ပြော ဆို ရှင်း ပြ နေ သည့် အ ခိုက် ၊ စီး မည့် ဘတ် စ ကား က လည်း ၊ ကား မှတ် တိုင် မှာ လာ ရပ် သည် ဖြင့် ၍ ၊ သူ ငယ် ချင်း များ အား လုံး က လှမ်း မြင် တွေ့ပြီး ၊ လိုက် ၍ တက် စီး သွား ကြ တော့ မှ သာ ရင် ထဲ တွင် ၊ အ လုံး ကြီး ကျ သွား ရ သည် ဟု ဦး က ပြော ပြ ပါ တော့ သည် ။
ဦး ပြော သော စ ကား များ အား…
ရုတ် တ ရက် သ္မီး က သ ဘော ပေါက် နား လည် မည် မ ဟုတ် ၊ သ္မီး နှင့် သာ သီး သန့်တွေ့ချင် ပြီး စ ကား ပြော ချင် သ ဖြင့် ၊ သူ ငယ် များ အား တ ဖက် လှည့် နှင့် ပ ထုတ် ခဲ့ ရ ခြင်း သာ ဖြစ် ကြောင်း ဦး က စီ ကာ ပတ် ကုန်း ပြော ပြ ပါ နေ သည် ။
ပြီး လျှင် ဦး က….
မ ထင် မှတ် ပါ ပဲ …
ကျ မ ၏ လက် ကို လှမ်း ဆွဲ ၍ ဖမ်း ဆုတ် ခါ ၊ ပြည် သူ့မုန့် တိုက် ထဲ ခ ဏ ၀င် ထိုင် ကြ ရ အောင် ဟု ပြော ပါ သည် ။
ကျ မ မှ ဦး ဖမ်း ဆွဲ ထား သော လက် အား ၊ ရုတ် တ ရက် ချက် ခြင်း ဆို သ လို ပင် ပြန် ရုတ် သိမ်း ခဲ့ လိုက် မိ ပါ သည် ။
ဦး နှင့် အ တူ ပြည် သူ့မုန့်တိုက် ထဲ ရှိ ၊ စား ပွဲ အ လွတ် ၌ ၀င် ထိုင် စဉ် တွင် ၊ နာ ရင်း တွေ ထူ ပူ ပြီး ဦး အား ခေါင်း ပင် မ ဖော် နိုင် အောင် ၊ မ ကြည့် ရဲ လောက် အောင် ဖြစ် သွား မိ ခဲ့ ရ ပါ သည်။ စား ပွဲ ပေါ် ခုံ တွင် ခေါင်း ငုံ့ထိုင် နေ သ ဖြင့်
ဦး က လည်း စိတ် မ ကောင်း တော် တော် လေး ဖြစ် သွား ရှာ ပါ သည် ။
သ္မီး က အ ပျို ကြီး ဖား ဖား ဖြစ် နေ ၍ ၊ ရှက် တတ် နေ ပြီ ဆို တာ သိ လိုက် ရ ကြောင်း..
မျက် နှာ လည်း ရှက် သွေး ဖြာ ပြီး ၊ ချက် ခြင်း ရဲ တွတ် သွား သ ဖြင့် ၊အ ရင် က နှင့် မ တူ တော့ ကြောင်း ၊ ငယ် ငယ် က မြို့ထဲ သွား လျှင် ဦး ၏ လက် အား ဖမ်း ဆုတ် ခါ မြဲ မြဲ ကိုင် ထား တတ် ကြောင်း ၊ဦး က လည်း လက် ဆွဲ ပြီး နေ ရာ တ ကာ ခေါ် သွား ခဲ့ ကြောင်း ၊ အ ယင် က လို မျိုး ပင် စိတ် က ထင် မှတ် နေ မိ တာ ၊ ဦး မှား သည် ဟု ပြော ဆို ပြီး တောင်း ပန် သည် ဟု ဆို ခါ ၊ ပြန် ရှင်း ပြ နေ ပါ တော့ သည်။
နိုင် ငံ ခြား နှင့် လည်း အ ရမ်း ကွာ ခြား နေ သည် ဟု ၊ ကျ မ အား ဦး က ပြော ပြ နေ ပါ သည် ။
အ ခု သ မီး က လုံး လုံး ပြောင်း လဲ သွား သ ဖြင့် ၊ သ္မီး က ယော င်္ကျား လေး ဖြစ် ရင် အ ရမ်း ကောင်း မှာ ပဲ
ညီ အ ငယ် ဆုံး လေး လုပ် မ လား ၊ ယော င်္ကျား လေး အ င်္ကျီ ပေး ၀တ် ပြီး ၊ ယော င်္ကျား လေး လို နေ မ လား ဟု ဦး က ပြော ပါ တော့ သည် ။
ဦး ဘာ ကို ဆို လို ချင် နေ တာ လည်း ၊ ဦး ပြော နေ တာ တွေ ၊ ကျ မ တ ခု မှ နား မ လည် ဟု သာ တွင် တွင် ဆို နေ မိ ပါ သည် ။
ဦး ပြော နေ သည့် သ ဘော တ ရား တွေ ၊ လိုက် လည်း မ မှီ နား လည်း မ လည် ပါ ၊ ဘာ တွေ လာ ပြော နေ မှန်း မ သိ ၊ “ မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး ”ဟု ကျ မ က ဆို ခဲ့ မိ ပါ သည် ။။
မေဆွိ ရဲ့ သီချင်းကနေ စလိုက်တဲ့ သမီး နဲ့ ဦး တွေက အခုထိ အမြစ်တွယ်သွားတယ်နော်..
မိန်းကလေး တွေ ကျွန်မဆိုတဲ့ စကား တော်တော်ပျောက်သွားပြီး သမီးသမီး ဖြစ်ကုန်ကြတာ ကတော့ မေဆွိ နဲ့ သီချင်းရေးသူရဲ့ မှတ်တိုင်တစ်ခုပါဘဲ။
ညီလေး လုပ်ပြီး နှုတ်ခမ်းမွှေး ကျဲကျဲ နဲ့တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဒီကစောင့်နေသူ အိုးးး စောင့်နေသူ….
ဒီလူကြီးတော့ မဟုတ်တော့ဘူး …. ။
ဒဲ့မရလျှင် … တွတ်ယူမယ့်သဘောမှာရှိတယ် …. ။ (မွေးစားညီမလိုချင်တာကိုပြောတာပါ အဟီး :mrgreen:)
နောက်တပိုင်းကို ပြေးပြီအန်တီအေးရေ … ခွိခွိ
ကိုးရီးယားကားကြည့်ရတဲ့အတိုင်းမလုပ်နဲ့နော်… ကောင်းမယ့်ကိစ္စဆို မြန်မြန်လုပ်…